ချိတ်တိပ်နှင့်ခိုင်ခံ့ကပ်ကပ်။ ကစားစရာများ၊ ဖိနပ်များ၊ လက်အိတ်များ၊ ဦး ထုပ်၊ အိတ်များ၊ အိတ်များ၊ ခါးပတ်၊ အားကစားကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊
T က A / C CVC အထည်အလိပ်, Pocket အထည်အလိပ်, line အထည်အလိပ်ရောင်း
ကုန်ကြမ်း: အထည်တန်းစီ 76 ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား Semi-အရောင်ချွတ်, အရောင်ချွတ်, ဆေးဆိုး, ရှပ်အင်္ကျီအထည်များအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း, အိတ်ကပ်အထည်: 80% Polyster, 20% Cotton ချည်ခင် count: 45X45 ဝါ့ပ်သိပ်သည်းဆ: 110 ဖောက်သိပ်သည်းဆ
T က A / C 8020 အထည်အလိပ်ရောင်း
ပေ nonwoven geotextile ထည်ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: nonwoven အပ်ခြင်းဖြင့် PP (polypropylene) သို့မဟုတ်ပေ (polyester) တိုတောင်းသောဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်း www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်, ကအထီးကျန်, ရေနုတ်မြောင်း, အားဖြည့်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည်တို့ကိုရာထူးအမည်ရှိပါတယ်။ specification 1.Weight အမျိုးအစား: 80GSM - 1500GSM 2.Width: မက်6မီတာ, တောင်းဆိုချက်ကို 3.Color အဖြစ်တာရှည်သကဲ့သို့အပေါ်အဖြူ, အနက်ရောင်, Gray, အစိမ်းရောင်, ဘရောင်းနှင့်။ 4.Package: စက္ကူ core ကိုရေစိုခံအမြှေးပါးနှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်။ အသေးစိတ်ကို 5.Loading: 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft အမြင့်ကွန်တိန်နာ။ အိမ်ခြံမြေ 1.Good ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ချေးဖို့ခံနိုင်ရည်, အက်ဆစ်နှင့်အယ်ကာလီမှခံနိုင်ရည်, Anti-ဓာတ်တိုး 2.Separation, filtration, ရေနုတ်မြောင်း, အားဖြည့်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု function ကိုလျှောက်လွှာမဟုတ်သောယက် geotextiles အရပ်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် applications များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိသည် စီမံကိန်းများ။ သူတို့ကကိုအသုံးပြုဖို့ပါဝင်သည်: ရေထိန်းသိမ်းစီမံကိန်းနှင့်စသည်တို့ကိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက်လမ်းခင်း, ရထားလမ်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ... လေဆိပ်နှင့်ဆိပ်ကမ်းကိုမြစ်ဘဏ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး,
1 ရေးစပ်သီကုံး: 100% polyester2အကျယ်: 150cm, 250cm3ဂရမ်အလေးချိန်: 170GSM မှစ. avaliable4အရောင် 450GSM TO: ရွှေ, ငွေ, ကော်ဖီ, စသည်တို့5Flower ဒီဇိုင်း: ကြှနျုပျတို့သို့မဟုတ်သင့်နမူနာအဖြစ်6MOQ: 400M အရောင်နှုန်း7အသုံးပြုမှု: ဆိုဖာခုံ , ကုလားကာ, ကူရှင်ချုပ်အိမ်အထည်အလိပ်, ပရိဘောဂ, အိတ်, အိပ်ယာ, စသည်တို့ 8 ပုံစံ: Chenille, jacquard, ပန်း, သိုး, ဆိတ်ကို, အစင်း, တရားစွဲ, ပုံနှိပ်စသည်တို့ကို9Process ကို: ချည်ခင်ဆိုး
Spandex Poly လဲမှို့အထည်အလိပ်ရောင်း
1.XY-C20140001 2. comp: 60% Cotton; 36% Poly; 4% Spandex 3. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 50'Sx150D + 40D 4. အကျယ်: 145cm 5. အလေးချိန်: 250GSM 6. Pack: လိပ်နှုန်းနဲ့အများအားဖြင့်, 100meters ။ တစ်ဦးကအလိပ်တစ် PP အိတ်, စက္ကူပြွန်နှင့်အသေးစိတ်မျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုပါ။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့လိုအပ်လက်ခံပါ။ 7. Delivery အချိန်: 20days ။ 8. ငွေပေးချေမှုရမည့်: အမျိုးသမီး '' ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း, ဘောင်းဘီ 10.MOQ: 800 / ကော, 11.Finish: P / D ကို 12: ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: T / T, L / C ကိုမျက်မှောက် 9. အသုံးပြုမှုမှာပိတ်ထည်နဲ့အဝတ်အစားတွေလည်း
အရည်အသွေးမြင့်မား Bacific အင်ဖို၏ဖက်ရှင် Spandex လဲမှို့အထည်အလိပ်။ အမည်: ယက်အလေးချိန်: 180-200GSM အကျယ်: 55/56 "အရောင်: Romantic ခရမ်းရောင်အထုပ်: 98,5% Cotton 1.5% Spandex Feature ကို: Eco ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုပစ္စည်းအရအရည်အသွေးမြင့်မော်ဒယ် NO.:Y1325 Technical ၏ဖက်ရှင် Spandex လဲမှို့အထည်အလိပ် -friendly; Anti-ပိုးမွှား; စုပ်ယူ wicking; တာရှည်ခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & မှတ်စုများ MOQ: အရောင် & ဒီဇိုင်းကိုတင်ပို့နှုန်း 3000 ကိုက်: သမုဒ္ဒရာ / လေကြောင်းဖြင့် / သမုဒ်ဒရာဆိပ်ကမ်းကိုဖော်ပြ: ကွမ်ကျိုး Huangpu ဆိပ်ကမ်းအသုံးပြုမှု: အထည်ချုပ်; ဘောင်းဘီ; ကုတ်အင်္ကျီ Delivery: custermers '' အမိန့်အရ အရေအတွက်
လဲမှို့အိပ်ရာ Sheet များရောင်းချ
အရောင်ချွတ်သည် Air ကို-ဂျက် Loom 1/1 Poplin, ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ဖွဲ့စည်းပုံချည်ခင် DENSITY WIDTH မှတ်ချက်တွေကို 100% Cotton ကဒ် / Combed40x40 133x72 57/58 "1/1 ကဒ် / Combed40x40 133x100 20x20 အပေါ် 100% Cotton ရိုးရိုးကဒ်နှင့်ဖြီးနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အရည်အသွေးရှိနိုင်ပါ Weave 60x60 21x21 20x20 100x50 ကဒ် / Combed60x60 90x88 30x30 68x68 32x32 40x40 110x70 32x32 130x70 2/1 32x21 133x78 ကဒ် / Combed40x40 143x112 20x16 128x60 3/1 16x12 108x56 16x10 20x20 108x58 21x21 7x7 68x38 10x10 72x40 80x46
ဖွဲ့စည်းမှုချည်ခင်အလေးချိန်အကျယ်အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 100% polyester ဖဲ 75dx150d & 75dx100d & 50dx75d 80g / မီတာ-165g / မီတာ 44/45 "& 58/60" အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 100% polyester Tafetta 63x63 170T-210T 70g / မီတာ-90g / မီတာ 58 / Count 60 "အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 100% polyester minimatt 300D * 300D 220g / မီတာ-270g / မီတာ 58/60" အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 100% polyester pongee 75D * 75D 170T-210T 70g / မီတာ-100g / မီတာ 58/60 "အဖြူ & ဆိုး & 100% polyester အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 30DX30D 30gsm 58/60 "အဖြူ & ဆိုး & ပုံနှိပ် 100% polyester Organdy 30D + 20Dx2 58/60" mesh ပုံနှိပ်
T က A / C ထည်ရောင်းချ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ပစ္စည်း: polyester / CottonTechnics: WovenWidth: 63 "ချည်အရေအတွက်: * 24Density 24: 108 × 58Composition: T-/ CUsage: အထည်ချုပ်, ပင်မစာမျက်နှာ TextilePattern: TwillTrademark: TEFEISpecification: တန်း AOrigin: တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြအင်္ဂါရပ်များ: အရောင် 1) သူဌေး ( ) အပျော့နှင့်အချောမွေ့လက်ခံစားမှု2နှင့်အတူ, ဆိုးသော), ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတထိပ်တန်းတန်းနှင့်အလတ်စား-grade ကိုဝတ်သောအဝတ်ကိုအမျိုးမျိုး 3) ကျယ်ပြန့်ဝတ်စုံကို, အင်္ကျီ, ယူနီဖောင်း, တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်စုံနှင့်ဘောင်းဘီရှည်အတှကျအသုံးပွု 4) အထည်အလိပ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်စေရန်အသုံးပြု ထို့နောက် T က A / C ယူနီဖောင်းထည် twill 1. မှန် CT A / C 21 * 21 108 * 58 58/59 '' 2. မှန် CT A / C 24s * 24s * 108 * 58 58/59 '' 3. မှန် CT A / C 20X16 120X62 ကွဲပြားခြားနားသောချောအတွက်သာရရှိနိုင်ယက် 58/59 " 4. အဖွဲ့: 2/1 သို့မဟုတ် 3/1 5. အရောင်များ: ဖောက်သည်အရောင်ဇယားအရသိရှိရသည်။ 6. Pack: လိပ်ခုနှစ်တွင်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ်